Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 24/07/2020)
Christmas Markets nechitima kunokubatsira kupinda Krisimasi mweya ine rwendo kune rimwe remaguta Europe yepamwoyo. Travel nechitima uye kuti ruzivo rwako kupfuura mashiripiti nokusingaperi! zhinji nhepfenyuro dziri mumwoyo peguta, kuita rokufambira nechitima nyore nzira kusvika kwauri kuenda. Ungave uri kuenda tenga kuti zvipo mhuri, Mharidzo yacho mulled waini kana kuti vanongonakidzwa Krisimasi muchadenga pamwe vaunoda, wava nechokwadi kuti chisingakanganwiki zororo. Takaita vakanyora zvishomanana Europe yepamwoyo Christmas misika nechitima kuti murege kurasikirwa.
Kuenda enchanted Christmas misika nechitima!! Berlin nyore nokuda chitima mu Europe izvo zvinoita kuti akakwana rwendo. Discover akapfuma uye zvinonakidza nhoroondo guru German kuti, uyewo avo siyana Christmas misika, nezvakanakisisa pamwaka kunotenga, zviitiko uye culinary zvinofadza!
Gendarmenmarkt munhu anofanira kuona! setup Izvi kuzivikanwa somumwe zvikuru wakajeka kweBerlin raMwari Christmas misika. Ngazvirege kutongoravira zvimwe inobata vemo akadai gingerbread, rakagochwa chestnuts, mulled waini uye Sausages kuti mukuru German Christmas ruzivo.
Kusiyana nevamwe misika yakakura muEurope, the Prague Christmas Markets by Train offers more authenticity and comfort. musika Mumwe ane chisingakanganwiki mhepo. Maminitsi kure nechepakati chiteshi vari zvakajeka yakashongedzwa emapuranga zvirindo musi muPrague Old Town sikweya. Pano veko uye vashanyi vaunganire stocking fillers, matoyi emapuranga, Christmas muti zvishongo, chishongo ruoko-yakaitwa, uye zvemiti inonhuhwirira makenduru.
Edza mashoko zvinonaka yepanchi uye chinyakare zvihwitsi sezvo ukatarira paimba kuti kungomira pakati pokushanda kwayo nezvipiriso uye zvemaoresa, uyewo zvose manheru mhenyu hwamanda Concerts anoteererwa kubva Rathaus nhurikidzwa, ichi chinhu chikuru nzira yokugumisa zuva akakwana.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-christmas-markets-by-train/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)